जनसम्पर्क समिती पांचथर विश्व संजाल किन र केका लागि ; मोति चाम्लिङ -
Home > mophosala > जनसम्पर्क समिती पांचथर विश्व संजाल किन र केका लागि ; मोति चाम्लिङ
पृय पांचथरे तथा गैह्र पांचथरे
स्वदेश बिदेशका लोकतान्त्रवादी मित्रहरु!
राय मस्यौराका अनेकौं चरणहरु पार गर्दै हामिले केही दिन अगाडि मात्रै जनसम्पर्क समिती पांचथर – बिश्व संजालको निर्माण गर्यौं। बृहत्तर नेपाली राजनितिको आयातनमा हाम्रो जनसम्पर्क समिती पांचथर विश्व संजाल अत्यन्तै कनिष्ठ र लघु क्षेत्रफलमा आधारित संगठन भएपनी यसको उपादेयता र आकर्षण निकै बृहत बन्न पुगेको छ। बिशुद्द नेपाली राजनिती इतिहासमा प्रवाशमा रहेका जुनकुनै लोकतान्त्रीक जनमनहरु यस किसिमले जिल्लामा आवद्द भएर विश्व संजाल खडा गर्ने पहिलो उदाहरणिय शक्ति बनेको छ। आफू सजिन मात्र होइन अरुलाई सिकाउनु पनि गहण कदम र सामाजिक दायित्व हो भने निश्चय पनि हाम्रो विश्व संजाल यसार्थमा महत्वपूर्ण बिनिर्माण नै हो। हाम्रो पांचथर संजाल गठन भएसङ्गै यसले आज निकै पेचिला प्रश्नहरु पनि उब्जाएका छैनन् भन्न सकिन्न। अवश्य यसले नेपाली कांग्रेसको देश बिदेशमा चलायमान भातृसंगठन र मोडेलहरुमा महत्वाकांक्षि तरंग उत्पन्न गराएको हुन सक्छ। संगठनको नामको बिषयमा होस, या यसको गठनको जरुरत र उद्देश्यहरुमा किन नहोस, निकै चाख लाग्दा प्रश्नका झटारोहरु हामी सामु बेसुमार अनायसै आइलागिरहेका छन् । कतिपयले त गंभिरतापूर्वक नै हाम्रो पांचथर संजाललाई लिएर प्रश्न र प्रतिप्रश्न प्रहार गरिरहनु भएको छ। यी आम चासो र गुनासोप्रती हामी अत्यन्तै संवेदनशील भएर जवाफ दिइरहने प्रतिबद्दतामा अनुबन्धित भएका छौं। हो हामी यसप्रती जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्छ। तिनै कौतुहलता र आमचासोका खुल्दुली निवारण गर्ने क्रममा हामी कसैलाइ बिपक्षी अभिप्राय नराखेर अत्यन्तै स्वभाविक र मनासिव जवाफहरु बुंदागत रुपले प्रसारण गर्न चाहन्छौं।
१, जनसम्पर्क समिती पांचथर विश्व संजाल किन र केका लागि?
@, नेपाल हाम्रो जन्मभुमी भएतापनी बाध्यताले बिदेशिनु जटिल बिडम्बना त हुँदै हो। एकै जिल्लाका अनेक मित्रहरु, दाजुभाइ दिदिबहिनिहरु संसारका विभिन्न देशहरुमा बांडिएर जिविकोपार्जनहेतु श्रम गरिरहेका छन्। एउटै गृहजिल्लाका अलग थलग दशकौंसम्म बिभक्त भएर बांच्नु पर्दा हामी अवश्य एकार्काको खोजिमा त थियौं र जो कोहि पनि खोजिमा हुने नै भए। त्यसमा पनि एउटै राजनिती बिचारधाराका एकै गृह जिल्लावासिहरुको मिलन देश र जनताकै निम्ति लाभदायक रहन्छ। एकै राजनिती बिचारधारामा आवद्द जनशक्तिले ऐक्यवद्दता जनाएर अघि बढ्ने तत्व ज्ञान प्राप्त भएमा त्यो कामयाविमा रुपान्तरण हुन सक्छ। आजको विश्वमा एक्लैले कुनै पनि चुनौतिको सामना गर्न कठिन मात्र होइन असम्भवप्राय नै हुन्छ।
देशमा यतिबेला लोकतन्त्रको आवरणमा चरम ब्यक्तिवादी चरित्रको राजनिती दल एमाले र माओबादीको करिव दुई तिहाइको बलशाली सरकार हावी छ। दिनानुदिन बामपन्थी चरित्र उदांगिदो छ। बिकेन्दृकरणको नाममा केन्दृकृत एकाधिकारवादि शासन प्रणालीको आंशिक अभ्यास शुरु भएको छ। यो फांसिवादतर्फ उन्मुख छ। लोकतन्त्रको घाँटी निमोठन सबै प्रदेश र संघिय सरकारमा एकल बहुमतका साथ जनप्रतिनिधिहरुको घुंइचोले यो सरकार आफैमा कुन बाटो जाने भनी दिग्भ्रमित भएको छ। उनिहरु जति दिग्भ्रमित छन् त्यति नै लोकतन्त्र बिरोधी गतिबिधिलाई तिब्रता दिने काम भैरहेको छ। मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, बलत्कार, घुशखोरि, स्थानिय तहमा भैरहेका श्रोत साधनमा अनियन्त्रीत अपचलन यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपाली जनताका खुसिले होस या आकांक्षाले, त्रासले होस या बिवशताले, गलत बुझाइले होस या बाध्यताले गत प्रदेश र संघिय महानिर्वाचनमा बाम गठजोडले एकल बहुमत प्राप्त गरेकै हो परन्तु जनता झुक्किएकै होकि भन्ने अन्यौल अब समाप्तप्राय भैसकेको छ। अब फेरि के त, यो सरकारको अवज्ञा नै अन्तिम उपाय हो? होइन यो सरकारले आफ्नो पूर्ण आयु निसन्देह पूरा गर्नै पर्छ। तर सरकारको अकर्मण्यतालाई शान्तिपूर्ण बिरोध गर्ने, खवरदारी गर्ने अभियानमा हामी कसैले चुक्नु हुन्न। अबको चार बर्षपछी नै यो सरकार जनताबाट दण्डीत हुने अवसर आउने छ, त्यही घडिको भरमग्दूर उपयोग गर्नु नै लोकतान्त्रीक परिपाटिको आशक्तिमा आवद्द जनता जनार्दनको परम कर्तव्य हुन आउँछ। हो त्यही शुभघडिको दिन देशका तमाम लोकतन्त्रवादिहरुले शान्तिपूर्ण र प्रभावकारी जनमतका साथ बिजय हासिल गर्ने प्रण लिएर देश बिदेशबाट जुट्न ढिला भैसकेको छ। यसका निम्ति सामूहिक रुपमा ऐक्यबद्द भएर जानका लागी नेपालका ७ वटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका लोकतन्त्रवादिहरुको आपसी सुझबुझ र मैतृवत सहयोग आदान प्रदान हुन जरुरी छ। यसलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्दा प्रवाशमा रहेका प्रत्येक नेपाली लोकतान्त्रवादी जनमतबिचको दूरी कम गरेर सहकार्यमा नारिनु अपरिहार्य बनेको छ। त्यसैले कमसेकम पनि एकै गृह जिल्लाका लोकतन्त्रवादी मित्रहरुको प्रवाशी संजालको शुरुवात हामिले गरेका हौं।
हामिले न नेपाली कांग्रेशको बिदेशस्थित भातृसंस्थालाई चुनौती दिएका हौं न त ती भातृसंस्थाहरुको बिकल्प नै दिन खोजेका हौं। हामिले त केवल एकै गृह जिल्लाका प्रवाशी लोकतन्त्रवादिहरुको प्रभावकारी एकता र मजबुद सहकार्य फलदायी हुन्छ भन्ने निचोड निकालेर जनसम्पर्क समिती पांचथर विश्व संजाल निर्माण गरेका हौं। हामिलाई यसका निम्ति कसैको स्वीकृति पत्र प्रतीक्षा गर्नु पनि छैन र कसैको नियन्त्रणमा रहेर काम नै गर्नु छ। हामी काम गर्दछौं केवल पांचथर कांग्रेशको समिपमा रहेर संभव रहेसम्मको मद्दती कदममा एकाकार भएर। हामी यस किसिमको संस्थाले मात्र प्रवासबाट निर्णायक भुमिका सहितको टेवा दिन पुर्याउने बिश्वास गर्दछौं। त्यसैले पांचथर विश्व संजालले जनसम्पर्क समिती भनेर नै आफ्नो नामको न्वारान गरेको छ। नेपाली कांग्रेशको भातृ संस्थाले “नेपाली जनसम्पर्क समिती फलानो देश”, ढिस्कानो देश भनि नाम राखेको छ। तर हामिले “नेपाली जनसम्पर्क समिती” उल्लेख नगरी “जनसम्पर्क समिती” मात्र लेखेका छौं। हामिले जनसम्पर्क समिती नाम सापटी लिएको नठानिदिनहुन पनि हार्दिक निबेदन गर्दछौं। यो शब्द कांग्रेशको भातृसंगठनले प्रयोग गरि आएको भएपनि के बिग्र्यो? हामी पनि एकै गृह जिल्लाका प्रवाशी संगठनमा आवद्द हुँदै गरेकाहामी पनि एकै गृह जिल्लाका प्रवाशी संगठनमा आवद्द हुँदै गरेका कांग्रेस नै हौं। हाम्रो पनि लक्ष्य एउटै हो। तसर्थ हाम्रो संगठनको नामप्रती आपत्ती जनाउन आवश्यक छैन। जनसम्पर्क समिती भन्ने दुई शब्द कसैको पेवा शब्द हुन सक्तैन।
आज केवल एउटै प्रश्नको लामो उत्तर सहित बिदा माग्छु, जय नेपाल।
कोषाध्यक्ष / प्रवक्ता
जनसम्पर्क समिति पांचथर
राजधानी हेटौंडाबाट सर्दैन : नेता बानियाँ
अचम्म लाग्यो चोकमा ठुलै महल बन्दोरहेछ पान बेचेर पनि
कर्णालीवासीको सास्कृतिक गहना देउडा दोहोरी
रुकुम पश्चिममा बस दुर्घटना, एकको मृत्यु,१६ जना घाइते
डाक्टरको लाप्रबाहीले सुत्केहीको ज्यान गएको भन्दै आफन्तहरु आन्दोलित
‘हामीलाई अर्को आन्दोलन चाहिएको छ’
Mohan Shahi September 23, 2019 0
काठमाडौँ । नेकपा (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फेरि एउटा अर्को आन्दोलनको आवश्यक रहेको बताएका छन् । दिवंगत नेतृ सहाना प्रधानको स्मृतिमा सोमबार पार्टी
देउवाद्वारा ‘नेकपा सरकारका काण्डै काण्ड’ विमोचन
Mohan Shahi September 23, 2019 September 23, 2019 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघका निःवर्तमान अध्यक्ष नैनसिंह महरको पुस्तक ‘काण्डै काण्ड विमोचन गरेका छन्। सभापति देउवाले पुस्तक विमोचन गर्दै विना
श्री एयरलाइन्सले जेष्ठ नागरिकलाई ५ सयमै प्लेन चढाउने
काठमाडौं। झट्ट सुन्दा ५ सयमै प्लेन चढाउने कुरा विश्वास नलाग्ला। तर, कुरा सत्य नै हो । केही समय पहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई
राष्ट्रपतिलाई तरूण दलको प्रश्न, ‘ओलीको इसारा बुझ्ने, देउवाको बोली नबुझ्ने ?’
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको ‘बोली बुझिन’ भनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका व्यङ्ग्यलाई लिएर तरुण दल आक्रोशित बनेको छ। केही दि
काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या १ हजार मात्र
Mohan Shahi September 22, 2019 September 23, 2019 0
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको छातामुनि आउन १९ संघसंस्थाले पार्टीमा आवेदन दिएका छन् । जसमा ७ भ्रातृ र १२ वटा शुभेच्छुक संस्थाले मान्यता दिन माग गरेका छन् । विभिन्न समयमा काँग्रेससँग जोडिए
‘हामीलाई अर्को आन्दोलन चाहिएको छ’ https://t.co/Bb06muExRP
देउवाद्वारा 'नेकपा सरकारका काण्डै काण्ड' विमोचन https://t.co/7fyf5vWJV6
श्री एयरलाइन्सले जेष्ठ नागरिकलाई ५ सयमै प्लेन चढाउने https://t.co/X724RMfOzH
राष्ट्रपतिलाई तरूण दलको प्रश्न, ‘ओलीको इसारा बुझ्ने, देउवाको बोली नबुझ्ने ?’ https://t.co/vLp16ISQ77
काँग्रेसको छातामुनि आउन १९ संस्थाको आवेदन भ्रातृ संस्थाबारे काँग्रेसमा बहस : महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या १ हजार… https://t.co/TX8dVVdtpV
‘ओली ज्यू स्वास्थ्य उपचारको महत्व तपाईंले जति कसले बुझ्ला? https://t.co/LrwlpmaOZq
मनसुन अझै लम्बिने, यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान https://t.co/n7189AumdK
चितवन मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत विद्यार्थी बिच सहमति https://t.co/lFPUmaO3eX